🥇အကောင်းဆုံးကြေးနီရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများ နိုဝင်ဘာ 2021 | အခမဲ့ Pro ကုန်သွယ်မှုလမ်းညွှန်။
28 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020 | နောက်ဆုံးရေးသားချိန်:3နိုဝင်ဘာလ 2021
သို့သော်၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယအများဆုံးရောင်းဝယ်သောသတ္တုဖြစ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးပြီးကမ္ဘာ၏တိုးတက်မှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပေါင်းစပ်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်ကြေးနီ၏ဂုဏ်သတ္တိများသည်၎င်းကိုမြင့်မားသောစွယ်စုံသတ္တုအဖြစ်ပြုလုပ်သည်။
၄ င်း၏သာလွန်သောအပူနှင့်လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်မှု၊ ပုံသွင်းနိုင်မှုနှင့်ချေးနိုင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်၎င်းကိုသံမဏိနှင့်လူမီနီယမ်ပြီးလျှင်သုံးပုံတစ်ပုံသာစက်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုတွင်၎င်း၏အခန်းကဏ္ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ၂၀၃၀ တွင်ကြေးနီစားသုံးမှု ၂၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာလိမ့်မည်ဟုကျွမ်းကျင်သူများကမျှော်လင့်ကြသည်။
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်ဤ ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ကြေးနီရောင်းဝယ်မှုသည်အကျိုးအမြတ်များသောပိုင်ဆိုင်မှုနယ်ပယ်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သတ္တုကိုသင်အနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်သင့်တော်သောအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အမြတ်တစ်ခုရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း၏စီးပွားရေးသဘောတရားဖြစ်သောမည်သည့်အခြေခံကုန်ပစ္စည်းမဆို၏တူညီသောကုန်သွယ်မှုအခြေခံများကို Copper သည်လိုက်နာသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောမဟာဗျူဟာကို“ က” ဟုခေါ်သည် ရှည်လျားသောအနေအထား, သင်သည်အဘယ်မှာသင်ပထမ ဦး ဆုံးဝယ်နောက်ပိုင်းတွင်ရောင်းဘယ်မှာ။
အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်လျှင်သင်ကကြေးနီစျေးနှုန်းကျဆင်းသွားမည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ နေရာတို။ သင်သည်ကုန်စည်တစ်ခုကိုကြေးနီ၏တန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုသောအနကျအဓိပ်ပါယျမှတဆင့်ကုန်သွယ်သောအခါဤနည်းလမ်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်မှန်းဆခဲ့သည့်အတိုင်းကြေးနီကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ရန်အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကအနကျအဓိပ်ပါယျကစားသို့ရောက်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ကြေးနီကုန်သွယ်မှုဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများတွင်ရွေးချယ်စရာများ၊ အနာဂတ်နှင့် CFD များပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့မကြာမီတစ် ဦး ချင်းစီ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသို့ရလိမ့်မယ်။
စျေးကွက်၏ရောင်းလိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားမှာမညီမျှမှုကြောင့်ကြေးနီ၏စျေးနှုန်းကိုလွှမ်းမိုးနေသည်။ အားကောင်းသောကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကျန်းမာရေးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြေးနီဈေးနှုန်းများကိုမြင့်တက်စေသည် တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရုန်းကန်နေရသောစီးပွားရေးသည်ကြေးနီ ၀ ယ်လိုအားနည်းပါးသဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
ဤသတ္တုသည်စျေးကွက်တွင် Doctor Copper ကိုတီထွင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းဖြစ်ရန်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်၎င်းသည်ပါရဂူဘွဲ့ထိုက်သင့်သည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကြေးနီသတ္တုသိုက်သည်ချီလီ၊ သြစတြေးလျ၊ ပီရူး၊ မက္ကဆီကိုနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တွင်ဖြန့်ဝေထားသည်။ အဓိကစားသုံးသူများမှာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနှင့်ဘရာဇီးကဲ့သို့သောအခြားထွန်းသစ်စစျေးကွက်များဖြစ်သည်။ ကြေးနီကိုထုတ်လုပ်မှု၊ စွမ်းအင်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္inများတွင်အသုံးပြုသည်။
တိုင်းပြည်များသည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသောအခါကြေးနီလိုအပ်ချက်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်တရုတ်သည်ကမ္ဘာ့ကြေးနီသုံးစွဲမှု၏ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
COVID-19 ကူးစက်မှုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူမှုစီးပွားရေးရှုထောင့်မှကြေးနီကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပီရူးထုတ်လုပ်မှုကိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီမှမေလကြားတွင် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။ ထို့နောက်သင်သည်ချီလီ၏ Chuquicamata သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းကို 23 တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ရေကြီးခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မြေပြိုခြင်းကဲ့သို့သောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များသည်လည်းသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ သတ္တုတွင်းများ၏အငြင်းပွားမှုများနှင့်ပိတ်ပစ်ခြင်းများမှာလည်း ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကြေးနီစျေးနှုန်းတက်ခြင်းတို့ကြောင့်ရောင်းလိုအားကိုကန့်သတ်လိမ့်မည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကြေးနီကိုကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုး၊ ရေပိုက်၊ အမိုးနှင့်အခြားအလုပ်များပြုလုပ်သည်။
၎င်းသည်နိုင်ငံအတွင်းအသုံးပြုသောကြေးနီ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကိုအကျိုးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ကြေးနီကုန်သွယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်ယူအက်စ်ဂျီဒီပီအပါအ ၀ င်အိမ်ရာဈေးကွက်အပေါ်သြဇာသက်ရောက်သည့်အချက်များကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရလိမ့်မည်။
အလူမီနီယမ်ကိုလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင်ကြေးနီအစားထိုးခြင်းအဖြစ်မကြာခဏရွေးချယ်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့်နီကယ်၊ ခဲနှင့်သံတို့ကိုရည်ရွယ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ အသုံးပြုသည်။ သဘာဝကျကျ tသူသည်ကြေးနီစျေးနှုန်းကျဆင်းစေသည်။
သင်သည်ကြေးနီကိုမြင်သာထင်သာရှိသောအခြေအနေတွင်ကူးသန်းရောင်းဝယ်လိုပါက၎င်းသည်သတ္တုများကိုအရောင်တောက်ခြင်း၊ ဘားများသို့မဟုတ်ဒင်္ဂါးများဖြင့်ရယူနိုင်သည်။ ဤအရာများကိုအောင်စ၊ တန်ချိန်၊ ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ်ဂရမ်များဖြင့်ချိန်တွယ်သည်။ သို့သော်သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်းကြေးဘီလီယံပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းသည်အလွယ်ကူဆုံးအလုပ်မဟုတ်ပါ။
ဘို့ အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ကြေးနီသည်များသောအားဖြင့်ရွေးစရာများ၊ အနာဂတ်၊ ETFs နှင့် CFDs ကဲ့သို့သောအနကျအဓိပ်ပါယျများနှင့်ဆက်ဆံသည်။ များသောအားဖြင့်ကြေးနီစျေးနှုန်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်ဖော်ပြသည်။ Greenback သည်ကုန်စည်အများစုကိုကုန်သွယ်ရန်အခြေခံစံနှုန်းဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသောအွန်လိုင်းပွဲစားပေါ် မူတည်၍ သင်၏ငွေစာရင်းထဲသို့သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးဖြင့်ငွေသွင်းနိုင်သည်။
ကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်၌မတူညီသောဖလှယ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်တစ်ပတ်လျှင် ၂၄ နာရီလုံးလုံးအီလက်ထရွန်နစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
London Metal Exchange (LME)၊
ချီကာဂိုကုန်သွယ်အိတ်ချိန်း (CME) နှင့်
ကြေးနီစျေးကွက်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ည ၁၀း၀၀ မှည ၉း၀၀ နာရီအထိဖွင့်လှစ်သည်။ ကုန်သည်များသည်ဤစျေးကွက်များကိုအွန်လိုင်းပွဲစားများမှတစ်ဆင့် ၀ င်ရောက်နိုင်ပြီး၊
အွန်လိုင်းကြေးရောင်းဝယ်မှုကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Bullions နှင့်ကြေးနီစပါးများသည်ကြေးနီကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်ကုန်သည်များသည်ကြေးနီ၏တန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်စေသောဘဏ္contractsာရေးဆိုင်ရာစာချုပ်များဖြစ်သောကုန်ကြမ်းများမှတဆင့်ဤသတ္တုကိုအမြတ်ထုတ်ကြသည်။
သင်၏ပြန်လည်ရောက်ရှိမှုသည်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းချောမွေ့စွာလည်ပတ်ရုံသာမကကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်၎င်းင်း၏ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မည့်အခြားပြissuesနာများပေါ်တွင်လည်းမူတည်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ပစ္စည်းကိရိယာစျေးနှုန်း၊ ရေနံစသည့်သွင်းအားစုကုန်ကျစရိတ်များသည်အစုရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းအပေါ်လည်းသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ကြေးနီတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ထင်ရှားသောနာမည်အချို့မှာ Turquoise Hill Resources LTD (TRQ), Southern Copper Corp. (SCCO) နှင့် Lundin Mining Corp. (LUN) တို့ဖြစ်သည်။
Exchange-Traded Funds (ETFs) များကိုအများပြည်သူဖလှယ်ရေးတွင်လည်းစာရင်းသွင်းထားသည် - အစုရှယ်ယာများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ခြားနားချက်မှာ ETF များသည်ကုမ္ပဏီများကိုအာရုံစိုက်မည့်အစားဈေးကွက်ရှိကြေးနီတန်ဖိုးအတိုင်းလိုက်နေသောစတော့ရှယ်ယာများကဲ့သို့သောအရာဝတ္ထုများကိုခြေရာခံသည်။
ရည်ညွှန်းအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောကြေးနီ ETFs နှစ်ခုမှာ United States Copper Index Fund (CPER) နှင့် iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC) တို့ဖြစ်သည်။
ကြေးနီ၏အခြေခံဝုဏ် ETF အရောင်းအဝယ်ကတော့သင် CPER ETFs ၀ ယ်ပြီးကြေးနီရဲ့တန်ဖိုးတက်မယ်ဆိုရင် ETF ရဲ့တန်ဖိုးကတက်လာလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်၎င်း၏သတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်သတ္တုကိုပိုင်ဆိုင်စရာမလိုဘဲကြေးနီအစုရှယ်ယာများကိုရရှိနိုင်သည်။
အသုံးအများဆုံးသောကြေးနီထုတ်ကုန်များအနက်တစ်ခုမှာခြားနားခြင်းသို့မဟုတ် CFD အတွက်စာချုပ်များဖြစ်သည်။ သင်အမှန်တကယ်သတ္တု ၀ ယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းအစားစျေးကွက်အတွင်းရှိကြေးနီစျေးနှုန်းကိုထိရောက်စွာထင်ဟပ်စေသောပွဲစားနှင့်သင်စာချုပ်များကိုရောင်းဝယ်လိမ့်မည်။
စတော့ရှယ်ယာများ (ETFs) နှင့်ဆင်တူသဖြင့်သင်သည်ကြေးနီစျေးနှုန်းနှင့်အနာဂတ်တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ကိုခန့်မှန်းလိမ့်မည်။
ဥပမာပြရလျှင်ကြေးနီ CFD ကုန်သွယ်မှုသည်မည်သို့ထွက်ပေါ်လာမည်နည်း။
လက်ရှိကြေးမှာဒေါ်လာ ၃.၅၀ ဖြစ်သည်
သင်၏ပွဲစားသည်စျေးကွက်ပေါက်စျေးဒေါ်လာ ၃.၅၀ ဖြင့် CFD ကိုကမ်းလှမ်းသည်
ကြေးနီ၏တန်ဖိုးသည်ဒေါ်လာ ၅.၀၀ အထိဖြစ်သည်
ယခု CFDs များကိုဒေါ်လာ ၅.၀၀ ဖြင့်လည်းတန်ဖိုးသတ်မှတ်လိမ့်မည်
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် CFD များသည်ကြေး၏တူညီသောတန်ဖိုးကိုအမြဲတမ်းသယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်ကြေးနီကိုဝယ်မည့်အစားသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကန်ထရိုက်များမှတဆင့်ကိုယ်စားပြုသည်။
CFD များသည်ကြေးနီကုန်သည်များအတွက်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအမှန်တကယ်ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းစရိတ်များကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
ထို့အပြင်သူတို့သည်သင့်အားကြေးနီစျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုမှသာမက၎င်းကျဆင်းသွားသည့်အခါမှလည်းသင့်အားအမြတ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ကြေးနီ CFD များကိုတိုစေခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပြီးမြောက်စေနိုင်သည်။
ယခုလက်ရှိကြေးနီသည်တစ်ပေါင်လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၅၀ ဖြစ်သည်
ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ပွဲစားကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန်ရောင်းဖို့အမိန့်ပေးခိုင်းတယ်
နောက်တစ်နေ့မှာကြေးကြေး ၂.၅% ကျသွားတာကြောင့်သင်မှန်ခဲ့တယ်
သင်၏ရောင်း ၀ ယ်မှုအမှာ (ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ နှင့် ၂.၅%) မှအမြတ် ၂၅ ဒေါ်လာရနိုင်သည်
ယခု CFDs ကိုသုံးခြင်း၏အားသာချက်မှာသင်၏ကုန်သွယ်မှု၌သင်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အရစ်ကျငွေစာရင်းရှိသင့်ထက်များစွာသောကုန်သွယ်မှုကိုသင်ဖွင့်နိုင်သည်။ သငျသညျမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ထို့နောက်သင်အကြွေးအပေါ်ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည့်ပွဲစားထံမှငွေချေးလိမ့်မည်။
အထက်ဖော်ပြပါဥပမာတွင်၊ သင်သည် lex 10x ကိုအသုံးပြုလျှင်သင်၏ ၂၅ ဒေါ်လာအမြတ်သည်ဒေါ်လာ ၂၅၀ အထိဖြစ်လိမ့်မည်။ သြဇာသည်အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုမြန်ဆန်စေနိုင်သည်။
တူညီသောအကြောင်းပြချက်များအရအမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံများစွာတွင် CFD များမှတဆင့်သြဇာသက်ရောက်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။ ယူကေနှင့်ဥရောပတို့တွင်ကြေးနီသြဇာကို ၁း၁၀ တွင်ကန့်သတ်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ညှိနှိုင်းထားသောကြေးစားပွဲစားများနှင့်သင်ကုန်သွယ်မှုပြုလျှင်သင်ဖြစ်သင့်သည်ဆိုပါက၎င်းထက်ပိုမိုသောသြဇာကိုမရနိုင်ပါ။
ကြေးနီအနာဂတ်သည်အခြားစာချုပ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးကုန်သည်ကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောရက်တွင်သတ္တုကိုသတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချရန်သဘောတူသည်။ ဤနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူထားသည့်စျေးနှုန်းကို (က) ဟုခေါ်သည် စျေးနှုန်း.
များသောအားဖြင့်ကြေးနီအနာဂတ်သည်သုံးလအတွက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်ကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ ယင်းနောက်ပါ ၀ င်သူများသည်စာချုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုကို ၀ ယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ သင်ကစျေးကွက်ကသင့်ကိုဆန့်ကျင်လျှင်ပင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသောအခါသင်ကုန်သွယ်မှုအနာဂတ်ကိုဆက်လက်ကိုင်စွဲထားပါကကုန်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်ရမည်။
CFD များနှင့်ဆင်တူသည်ကြေးနီအနာဂတ်သည်သြဇာ ရှိ၍ တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ နောက်ဆုံး၌စျေးကွက်၏မတည်ငြိမ်မှုသည်အနာဂတ်ကိုအနာဂတ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောကုန်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကြေးနီရွေးချယ်မှုများသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်သပိတ်မှောက်သည့်စျေးနှုန်းများပါ ၀ င်သည့်အလားအလာများလည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အဓိကခြားနားချက်မှာကုန်သွယ်မှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးရန်သင့်အတွက်တာဝန်မရှိပါ။ အဲဒီအစား, သင်ရှိသည် မှန်သော ကြေးနီကိုဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချရန်။
သင်ယုံကြည်လျှင်ကြေးနီစျေးနှုန်းတက်လိမ့်မည်ဟုသင်ဝယ်ယူလိမ့်မည် cရွေးချယ်မှုအားလုံး။ စျေးနှုန်းကျလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်ရင်သင်ကကြေးနီကိုဝယ်လိမ့်မယ် put options များ.
အဆိုပါသပိတ်စျေးနှုန်း $ 5.00 မှာဖြစ်ပါတယ်
စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်၊ ဆက်သွယ်သူတစ် ဦး လျှင်ပရီမီယံဒေါ်လာ (၀.၅၀) ပေးရပါမည်
အနိမ့်ဆုံးမှာယူမှုမှာစာချုပ် ၁၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြစ်သည်
ရွေးချယ်မှုများကုန်ဆုံးသွားသောအခါကြေးနီသည်ဒေါ်လာ ၇.၀၀ တန်သည်။ ထိုပမာဏသည်ဒေါ်လာ ၅.၀၀ ထက်ဒေါ်လာ ၂.၀၀ ဖြစ်သည်
ထို့ကြောင့်အမြတ်ငွေ $ 2,000 (ကန်ဒေါ်လာ ၂ x ၁၀၀၀) ရရှိသည်။
သင်ပေးခဲ့သောပရီမီယံဒေါ်လာ ၅၀၀ ကိုနုတ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အမြတ်အားလုံးဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ဖြစ်သည်
အရေးကြီးသည်မှာရွေးချယ်စရာများသက်တမ်းကုန်သွားပြီးကြေးနီသည်ဒေါ်လာ ၅.၀၀ တန်သောစျေးနှုန်းထက်လျော့နည်းလျှင် - သင်သည် ၀ ယ်ယူရန်သင်၏ပိုင်ခွင့်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ငြင်းဆန်လိမ့်မည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင်သည်သင်၏ပရီမီယံကန်ဒေါ်လာ ၀.၅၀ ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆုံးရှုံးသွားသည်။
အကယ်၍ သင်ကကြေးနီစျေးနှုန်းကျလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့လျှင်သင်အစား put options ကိုဝယ်ယူလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကြေးနီရွေးချယ်မှုသည်ကြေးဈေးတက်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းနှစ်ခုလုံးမှအမြတ်ရရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့မတူညီသောကြေးနီကုန်သွယ်မှုနည်းစနစ်များကိုရရှိပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကိုဗျူဟာများသို့ပြောင်းလဲမည်။ နောက်ဆုံးတော့, ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ စွန့်စားမှုမှရှောင်ရှားနိုင်သည့်အကျိုးအမြတ်များရရှိစေရန်သင့်အားကူညီပေးရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ role မှပါ ၀ င်သည်။
အကောင်းဆုံးကုန်သည်များအလိုက်အထိုက်နေတတ်ပြီးလက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသည့်နည်းဗျူဟာကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤအရာကိုစိတ်ထဲထားပြီးအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သာမာန်ကြေးနီသုံးခုကိုဆွေးနွေးပါမည် ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကိုတီထွင်ရန်သင့်အားလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။
လွှဲကုန်သည်များသည်တိုတောင်းသောကာလအတွင်းကြေးနီမြင့်တက်မှုနှင့်ကျဆင်းခြင်းကိုဖမ်းယူရန်ကြိုးစားကြသည်။ ဒါကရက်အနည်းငယ်ကနေရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အထိဖြစ်နိုင်တယ်။ ၎င်းတို့သည်စျေးကွက်၏ကွဲပြားမှုများ၏အားသာချက်ကိုရယူကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကြေးနီစျေးနှုန်းသည်အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုတွင်မြင့်တက်။ တက်နေသည်။
ကုန်သွယ်မှုပုံစံ၏အောင်မြင်မှုသည်ဤအပြောင်းအလဲတစ်ခုစီ၏အရှည်နှင့်ကြာချိန်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အထောက်အပံ့နှင့်ခုခံမှုအဆင့်များကိုမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ သင်စျေးကွက်မြင့်တက်လာသည်ဟုသံသယရှိပါကသင်ပိုင်ဆိုင်မှုကို ၀ ယ်သည်။
ဒါမှမဟုတ်၊ ကြေးနီစျေးနှုန်းကျလိမ့်မယ်လို့သင်သံသယဝင်လျှင်၊ သင်တိုတောင်းနိုင်သည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကြေးနီကိုသိမ်းထားချင်တယ် လွှဲကုန်သွယ် နေသမျှကာလပတ်လုံးသက်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းသစ်အရပျ၌တည်နေသမျှကာလပတ်လုံးအဘို့အဖွင့်အနေအထား။
ထောက်ခံမှုနှင့်ခုခံမှုအဆင့်များသည်အဓိကသဘောတရားများဖြစ်ပြီးကုန်သည်များက ၀ ယ်ခြင်း (သို့) ရောင်းခြင်းနေရာသည်မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းဖြစ်မဖြစ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်၊ အထောက်အပံ့လိုင်းများကပိုင်ဆိုင်မှုကျဆင်းခြင်းကိုရပ်တန့်စေနိုင်သောစျေးနှုန်းအဆင့်ကိုပြသသည်။
ဤကိစ္စတွင်ကြေးနီ၏ပံ့ပိုးမှုအဆင့်သည်သမိုင်းအစဉ်အလာအရကြေးနီစျေးနှုန်းသည်နောက်ထပ်ကျဆင်းမည်မဟုတ်သည့်ဖြတ်တောက်မှုမျဉ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းအဆင့်ကိုချိုးဖောက်ပါကအခြားထောက်ခံမှုအဆင့်နှင့်ထပ်မံဖြည့်ဆည်းရန်စျေးနှုန်းထပ်ကျလိမ့်မည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဆန့်ကျင်ဖက်အားဖြင့်စျေးနှုန်းသည်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှစျေးနှုန်းသည်ခုခံနိုင်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ကြေးနီကိုကြာမြင့်စွာသွားနေလျှင်စျေးနှုန်းသည်ဤခုခံမှုအဆင့်သို့မရောက်မီလေးတွင်အမြတ်အစွန်းကိုယူလိုသည်။ ကြေးနီပေါ်တွင်သမိုင်းဝင်ထောက်ခံမှုနှင့်ခုခံမှုအဆင့်များစွာရှိလိမ့်မည်၊ အချို့သည်အခြားသူများထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်။
ကြေးနီ ဦး ရေပြား
အဆိုပါ ဉီးခေါင်းရေ နည်းဗျူဟာသည်အသေးငယ်ဆုံးစျေးကွက်အပြောင်းအလဲ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအထူးပြုသည်။ ဤကြေးနီကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာသည်မသေချာမရေရာသည့်အချိန်များ၌ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြေးနီစျေးနှုန်းဟာစျေးနှုန်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းကုန်သွယ်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်။
အလှည့်အနေဖြင့် scalpers များသည်ကုန်သွယ်မှုနေ့တစ်လျှောက်လုံးရာထူးများစွာသို့ ၀ င်ထွက်နိုင်သည် - ၎င်းတို့သည်သက်ဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှုကာလကိုအမြတ်ထုတ်ရန်သေချာသည်။
အမြတ်ရည်မှန်းချက်များသည်အလွန်သေးငယ်သော်လည်းကြေးနီကိုတောက်လောင်စေသော်လည်းဤအမြတ်အစွန်းများသည်လျင်မြန်စွာတက်လာနိုင်သည်။ ထို့အပြင် scalpers များသောအားဖြင့်သေးငယ်တဲ့မာဂျင်များသောအကျိုးအမြတ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားစေရန်သေချာစေရန်သြဇာကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ကြေးနီအပါအ ၀ င်ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနယ်ပယ်အတွက်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကြေးနီစျေးနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောအခြေခံအချက်များအားလုံးကိုသင် ဦး စွာနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
လမ်းတစ်လျှောက်၌သင့်ကိုကူညီရန်ကြေးနီကိုစစ်ဆေးပါ ကုန်သွယ်အကြံပေးချက်များ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးစာအုပ်များကနှစ်ပေါင်းတစ်လျှောက်ကြေးနီစျေးကွက်မည်သို့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်ကိုသင်ပေးနိုင်သည်။ ဤစာအုပ်များသည်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များ၏ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများနှင့်သူတို့လေ့လာသင်ယူခဲ့သောသင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဤစာအုပ်များမှအသုံး ၀ င်သောအကြံဥာဏ်များနှင့်သင်ယူစရာအချက်များကိုသင်ရှာမရနိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
Roy W. Longstreet မှကုန်သည်ကုန်သည်တစ် ဦး ၏ရှုထောင့်များ
ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု - Paul E. Peterson ရဲ့အနာဂတ်လေ့ကျင့်သူများအတွက်လမ်းညွှန်
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော Carley Garner မှကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုအဆင့်မြင့်
အကယ်၍ စာဖတ်ခြင်းသည်သင်၏အားသာချက်မဟုတ်ပါကယနေ့အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများမှတစ်ဆင့်ကြေးရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တူညီသောသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနားလည်မှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်၊ ငါတို့ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာရှိသည်။ ကုန်သည်များကိုပညာပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ထိုနေရာတွင်အတိုအထွာများရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုသင့်အားကျွေးမွေးမည့်ဆောင်းပါးများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့ကြေးနီစျေးကွက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများစွာကိုဖော်ပြခဲ့သည့်အခါသင်၏ပထမဆုံးစဉ်းစားပုံကဤအရာအားလုံးကိုသင်မည်ကဲ့သို့ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်နည်း။ ကောင်းပြီ၊ အခြေခံနည်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းလမ်းနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်သင်ချဉ်းကပ်နိုင်သည်။
အခြေခံကျကျဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းသည်ပေါ်ထွက်လာသောစျေးကွက်များ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးရှုထောင့်စသည့်အချက်များအားရှင်းလင်းစွာဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏သတင်းအရင်းအမြစ်များကိုဘဏ္websitesာရေး ၀ ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဤအချက်အလက်ကိုသင်ရယူနိုင်သည်။
နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်စျေးကွက်ဖတ်ရန်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောအယ်လ်ဂိုရီသမ်မပါသောဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုသည် ဤရွေ့ကားကုန်သည်များသည်သမိုင်းဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများပေါ် အခြေခံ၍ အနာဂတ်တွင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုနားလည်ရန်ကူညီသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုနားလည်ရန်သင့်ဘက်မှအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များအတွက်ပင်ရှုပ်ထွေးသည်။ သူကဆိုပါတယ်, သူတို့ရဲ့အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်လုံးဝသူတို့ရဲ့သုတေသနကိုအခြေခံတဲ့သူကုန်သည်တွေလည်းရှိပါတယ်။
ကြေးနီကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွင်အချိန်ပြည့်အပ်နှံရန်လိုသည်ဟုထင်ရနိုင်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင်စျေးကွက်ထိပ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းဖြစ်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ဆောင်နှင့်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လျှင်အရေးယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
မသိသောသူများအတွက်အရောင်းအဝယ်အချက်ပြများသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်အမှာစာပေးရန်သင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။ မတူညီသောကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြပလက်ဖောင်းများသည်သင့်အားအချက်ပြမှုတစ်ခုစီကိုပို့ရန် algorithms အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Learn2Trade မှကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုများကိုနည်းပညာညွှန်းကိန်းများဖြစ်သော Fibonacci ပြန်လည်ဆင့်ကဲဆင့်ကဲအဆင့်ဆင့်၊ ထောက်ခံမှုနှင့်ခုခံမှုအဆင့်များ၊
အမြတ်အစွန်းများနှင့်ရပ်တန့်ခြင်းဆုံးရှုံးမှုများအပါအ ၀ င်မည်သည့်ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်များကို Telegram မှတဆင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီပို့ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပါသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်၊ သင်ဤအချက်ပြမှုများကို အခြေခံ၍ အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုချွေတာနိုင်လိမ့်မည်။
Copy Trader Feature ကိုသုံးပါ
ကုန်သည်အသစ်များအတွက်ကြေးနီကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကိုလေ့လာရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုမှာလယ်ပြင်၌ရှိသောကျွမ်းကျင်သူများကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းပွဲစားအနည်းငယ်သည်အတွေ့အကြုံရှိကြေးနီကုန်သည်များအမှာစာများဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုတုပရန်အတွက် Copy Trader ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ သင်တစ် ဦး ကုန်သည်တစ်ယောက်အားငွေပမာဏအတော်အတန်မြှုပ်နှံပါလိမ့်မည်။ ပြန်လည်အပြန်အလှန်အားဖြင့်သူတို့၏အစုစုကိုတူတူတူတူကူးယူပါ။
သင်ကူးယူလိုသောကုန်သည်တစ် ဦး ကိုသူတို့စွမ်းဆောင်ရည်၊ မူလပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများနှင့်စွန့်စားမှုပုံစံများပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဥပမာတစ်ခုပေးနိုင်ရန် eToro ၏ Copy Trader သည်သင်ရွေးချယ်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားဒေါ်လာ ၂၀၀ မှသာထင်ဟပ်စေသည်။
Demo Accounts ကိုသုံးပြီးကြေးနီကုန်သွယ်
သရုပ်ပြအကောင့်များသည်ယနေ့အွန်လိုင်းပွဲစားများအကြားတွင်ထင်ရှားသည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုနှင့်မဟာဗျူဟာများကိုကျင့်သုံးရန်သင်အသုံးပြုသောစက္ကူပိုက်ဆံဖြင့်ကြိုတင်ပြီးတင်ထားသည်။ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သောကြေးနီကုန်သည်များတောင်မှ၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်ရေးစနစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်လက်တွေ့စျေးကွက်အခြေအနေများကိုပုံတူပြုလုပ်သောသရုပ်ပြဆော့ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုကြသည်။
ဤသည်ကသင့်အားပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ interface၊ သုတေသနအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ကိရိယာများနှင့်အစစ်အမှန်ငွေကြေးကိုမစွန့်စားဘဲအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင့်အတွက်ကြေးနီကုန်သွယ်ရေးပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသောကြောင့်ကုန်သည်အသစ်တစ် ဦး သည်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားအတွက်အသင့်တော်ဆုံးပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်သည်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးကုန်သည်များအတွက်ပင်မသေချာမရေရာသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည်ပမာဏအနည်းငယ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပမာဏအမြောက်အများရောင်းဝယ်သည်ဖြစ်စေ၊ လုံခြုံရေးနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့်လိုင်စင်ရပွဲစားများနှင့်သင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အားလုံးအတွက်တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရရှိစေရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားသည်။ ကုန်သည်များနှင့်ပွဲစားများကိုကာကွယ်ရန်စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ဤအဖွဲ့များသည်ပွဲစားများကို၎င်းတို့၏သီးခြားတရားစီရင်မှုများကိုကြီးကြပ်နိုင်သည်။
ယူကေရှိ FCA၊ သြစတြေးလျမှ ASIC၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် CySEC၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင် FINMA နှင့် US ရှိ SEC တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသိအများဆုံးစည်းမျဉ်းဥပဒေများတွင်ပါဝင်သည်။ ကုန်သည်တစ် ဦး သည်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထဲမှတစ်ခုမှလိုင်စင်ရရှိသောအခါ၎င်းတို့သည်လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာခြင်းကြောင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ကုန်သွယ်ရေးအခကြေးငွေများသည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ပလက်ဖောင်းများသည်သင့်အားမည်သို့ကောက်ခံသည်နှင့်ပွဲစားတစ် ဦး မှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားပုံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပွဲစား၏အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်သင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်သည်ကဏ္ fee အားလုံးနီးပါးမှပွဲစားများမှကောက်ခံသောစံနှုန်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ကုန်သွယ်မှုသည်အွန်လိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့သွားသောအခါများစွာသောကုန်သည်များသည်ကော်မရှင်ကိုလျှော့ချရန်လည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကြေးနီကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်ခလုံးဝမရှိသည့်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုသင်တွေ့လျှင်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။
ကော်မရှင်ဘယ်မှာလဲ များမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ပါကကုန်သွယ်မှုတစ်ခုအတွက်သို့မဟုတ်အမိန့်တစ်ခုစီအတွက်တစ်ကြိမ်သာအခကြေးငွေဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ရာထူးကိုဖွင့်သည့်အချိန်တွင်၊ သင်ကပိတ်လိုက်သောအခါကော်မရှင်ကိုပေးရလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်ပြောရလျှင်သင်၏ပွဲစားသည်သင်၏ကြေးနီကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုအတွက်ကော်မရှင် ၂% ကောက်ခံသည်ဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကြေး ၀ ယ်ရန်အမှာစာအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ၀ ယ်ပါက၎င်းတို့ကိုကော်မရှင်အနေဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးရလိမ့်မည်။
လွှဲကုန်သွယ်ခြင်းကဲ့သို့သောကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများသည်သင့်အားတစ်ညတည်းထားရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့သောအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင့်အားတစ် ဦး တည်းသောငွေလဲလှယ်ရေးအခကြေးငွေဟုခေါ်တွင်သောညဥ့်နက်သောအခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်လည်းလိုအပ်လိမ့်မည်။
သင်၏အနေအထားကိုဖွင့်ထားရန်ပွဲစားအားသင်ပေးသောအတိုးနှုန်းနှင့်ဆင်တူသည်။ အချို့ပွဲစားများကလည်းစနေ၊ ရေရှည်အနေအထားကိုပွင့်လင်းစွာဖွင့်ထားပါကဤညချင်းငွေကြေးသည်အတော်အတန်များပြားလှသောငွေများကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်။
အချို့သောကြေးရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများသည်သင်၏အကောင့်အားမလှုပ်မရှားအချိန်အကြာတွင်သင့်အားအခကြေးငွေပေးကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခြောက်လသို့မဟုတ်တစ်နှစ်ကုန်သွယ်မှုမပြုခဲ့ပါကသင်၏ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေမှငွေပမာဏကိုပြန်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်အများစုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အွန်လိုင်းပွဲစားများသည်သင့်အားအခြားငွေကြေးများတွင်ငွေထည့်ရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းသင့်အတွက်ငွေကြေးလဲလှယ်ရန်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အခကြေးငွေပေးလိမ့်မည်။
သင်ဟာအစပြုသူဖြစ်စေ၊ ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်ဖြစ်စေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြေးနီကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပလက်ဖောင်းရဲ့ဒီဇိုင်းကမင်းသမီးလေးကိုမင်းကိုလွယ်ကူစေနိုင်တယ်။
အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်တစ် ဦး မှတစ်ဆင့်ကြေးနီကိုရောင်းဝယ်သောအခါသင်၏အကောင့်ထဲသို့ရန်ပုံငွေအချို့ကိုအရင်သွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးပွဲစားများသည်သင်၏ကန့်သတ်ချက်အတွက်ဘဏ်ကတ်များနှင့်ငွေပေးချေမှုစနစ်များရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့တွင် PayPal, Skrill သို့မဟုတ် Neteller ကဲ့သို့သော e-wallets များမှတဆင့်ရန်ပုံငွေများထပ်မံထည့်သွင်းရန်အတွက် third-party ပေါင်းစပ်မှုများရှိနိုင်သည်။
ကြေးနီကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်ကော်မရှင်များကိုသင်ရှောင်ရှားနိုင်သော်လည်းပြန့်ပွားမှုကိုကျော်လွှား။ မရပါ။ Lingo အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်လေလံသည်ဈေးနှုန်းနှင့်ကြေးစျေးနှုန်းအကြားကွာဟချက်ဖြစ်သည်။
သငျသညျ၏အရွယ်အစားကန့်သတ်ချင်တယ် ပျံ့နှံ့ သင့်ရဲ့အလားအလာရှိတဲ့အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်စေရန်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသည့်ပွဲစားများသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂ ခုသာကောက်ခံနိုင်သည် pips အရေးအသား၏ထိုအချိန်ကကြေးနီ CFDs အပေါ်။ သို့သော်၊ ပြန့်ပွားခြင်းကိုမသတ်မှတ်ထားကြောင်းသတိရပါ။ စျေးကွက်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်။
သင်မှန်းဆခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောကြေးနီအရောင်းအဝယ်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်သုတေသနများစွာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အချိန် မရှိ၍ ကြေးနီကိုယခုပင်ရောင်းဝယ်လိုသည်။
သို့ဆိုလျှင် Learn2Trade ရှိကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့မှကြိုတင်စစ်ဆေးပြီးသောအဆင့်မြင့်သတ္တုကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများအကြောင်းကိုအောက်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။
၄။ AVATrade - Tight Spreads နှင့်အတူကြေးနီ CFDs များကိုကုန်သွယ်ခြင်း
AVATrade သည်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးကဏ္inတွင်ထင်ရှားသောနာမည်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ASC, FFAJ, FSCA, ADGM နှင့် FSA တို့၏လိုင်စင်များဖြင့်ခိုင်မာသောဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ အကျိုးဆောင်သည်ကြေးနီ CFD များအတွက်အလွန်အပြိုင်အဆိုင်ပြန့်ပွားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ်မှီခိုပါက၊ AVATrade သည် MetaTrader4 နှင့် ၅ တို့နှင့်အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ကြောင်းသိရ။ သင် ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။ ကုန်သွယ်မှုပိုမိုလွယ်ကူစေရန် AVAOptions သို့မဟုတ် AVATradeGO တစ်ခုခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
သတင်းအချက်အလက်များစွာနှင့်စက္ကူရောင်းဝယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်သရုပ်ပြအကောင့်လည်းရှိပါသည်။ သင်အနိမ့်ဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀ သာရှိသောကြေးကုန်သွယ်အကောင့်တစ်ခုကိုစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
Capital.com သည် သင့်အား ကုန်စည် CFDs များမှတစ်ဆင့် ကြေးနီကို ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်၊ FCA၊ CySEC၊ ASIC နှင့် NBRB မှ ခွင့်ပြုထားသော Southern Copper Corp ကဲ့သို့သော ကြေးနီတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီများ၏ စတော့ရှယ်ယာ CFD များကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သည်၊ အဆိုပါပွဲစားသည် လက်ရှိတွင် သုံးစွဲသူ 700,000 ကျော်ရှိသည်။
အခုချက်ချင်းပဲ Copper Trading ပွဲစားနဲ့အကောင့်ဖွင့်ပါ
ဟုတ်တယ်၊ ကြေးနီကိုလိုလားသူလိုကုန်သွယ်ဖို့အချိန်ယူရလိမ့်မယ်။ သို့သော်သင်မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အွန်လိုင်းပွဲစားတစ် ဦး နှင့်အကောင့်တစ်ခုအတွက်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့် (၃) ဆင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုသာရိုးရှင်းစွာလိုက်နာပါ။
အဆင့် ၁ - ကြေးနီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်နှင့်မှတ်ပုံတင်ပါ
သင်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ကြေးနီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုရွေးချယ်ပြီးပါကစင်မြင့်သို့ သွား၍ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှအကောင်အထည်ဖော်သော Know your Customer (KYC) လုပ်ငန်းစဉ်အရ၊ သင်သည်သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ပေးရမည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပွဲစားများကသင်၏ ID နံပါတ်ကိုသင်၏မျက်နှာပေါ်တွင်ကိုင်ထားသည့်ဓာတ်ပုံကိုပို့ရန်လည်းတောင်းဆိုသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားလိမ်လည်မှုနှင့်ဘဏ္crimeာရေးရာဇ ၀ တ်မှုများကိုကာကွယ်ရန်သာဖြစ်သည်။
အဆင့် ၂ - သင်၏ကြေးနီကုန်သွယ်ရေးအကောင့်သို့ရန်ပုံငွေများထည့်ပါ
နှစ်မျိုးစလုံးကိုယူရန်မမေ့ပါနှင့် နှင့် သင့်ရဲ့အန္တရာယ်ကို minimize လုပ်ဖို့ stop- ဆုံးရှုံးမှုအမိန့်။ ထို့အပြင်ဖြစ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြေးအရောင်းပွဲစားမှပေးသောသရုပ်ပြအကောင့်စက်ရုံမှတဆင့်ကုန်သွယ်မှုအနည်းငယ်ကိုစမ်းကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်အရသာကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။
ရွှေနှင့်ငွေကဲ့သို့သောအခြားမာကျောသောသတ္တုများသည်ကြေးနီထက်များစွာပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။ သို့သော်တိုတောင်းသောကာလ၌သူတို့၏စျေးနှုန်းများသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားနိုင်ဖွယ်မရှိပေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကြေးနီသည်မတည်ငြိမ်သောသဘောသဘာဝအရရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဂဏန်းနှစ်လုံးရာခိုင်နှုန်းဖြင့်မြင့်တက်သွားနိုင်သည်။
၎င်းသည်ရေတိုနှင့်ရေရှည်ကုန်သည်များအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ တနည်းအားဖြင့်တစ် ဦး ကြေးနီစျေးကွက်၏စီးဆင်းမှုနှင့်စီးဆင်းမှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်သောအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်တစ် ဦး သည်အမြတ်ထုတ်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။
ဒါ့အပြင် CFDs, ETFs, Futures or options များမှတဆင့်ကြေးနီကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်ရေးအစီအစဉ်ရှိမရှိ - သင်ဟာအန္တရာယ်များကိုအခိုင်အမာဆုပ်ကိုင်ထားကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်ငွေများများဆုံးရှုံးခြင်း၏ခြိမ်းခြောက်မှုကိုတန်ပြန်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာကြေးကုန်သွယ်ရာနေရာများတွင်ရပ်နားရန်ဆုံးရှုံးမှုအမိန့်များတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ သရုပ်ပြအကောင့်စက်ကိုသင်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးတဲ့အွန်လိုင်းပွဲစားတစ်ယောက်နဲ့အကောင့်တစ်ခုလုပ်နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်ကြေးနီကိုစက္ကူဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်အချိန်မှန်စျေးကွက်တည်ဆောက်မှုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ကြေးနီ bullion ကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းသည်လက်တွေ့ကျသောအရာမဟုတ်သောကြောင့် CFDs, Futures or options များကဲ့သို့သောအနကျအဓိပ်ပါယျကိုသင်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည်ကြေးနီတူးဖော်သည့်ကုမ္ပဏီများ၏ရှယ်ယာများတွင်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
လိုင်စင်ရအွန်လိုင်းပွဲစားအားလုံးနီးပါးသည်ကြေးနီကုန်သွယ်မှုအပေါ်သြဇာသက်ရောက်သည်။ ဒေသအများစုတွင်ကြေးနီအပေါ်သြဇာကို ၁း၁၀ တွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ သီအိုရီအရ၊ ကြေးနီကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နိုင်တယ်။ သို့သော်၎င်းတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အာမခံနှင့်အခြားကုန်ကျစရိတ်များပါ ၀ င်သည်။ ကြေးနီထုတ်လုပ်မှုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်ငွေကြေးဆိုင်ရာ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြေးနီ ၀ ယ်ယူခြင်း၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကြေးနီဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုမှသင်အမြတ်ရလိုလျှင် CFDs များကိုကမ်းလှမ်းသောအွန်လိုင်းပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့သင်ဟာအရောင်းအမိန့်ကိုကြေးနီပေါ်မှာထားဖို့လိုတယ်။